I-PIVX ngokusemthethweni ifumaneka kwi-Wall of Coins! | PIVX
I-PIVX ngokusemthethweni ifumaneka kwi-Wall of Coins!
I-PIVX ibhalwe ngokusemthethweni njengemali yesithathu efumanekayo yokutshintshiselwa kwi-Wall of Coins!
‘Wall of Coins’ luyaziwa kwishishini njengeqonga elisekelwe kwiwebhu elivumela abasebenzisi ukuthenga nokuthengisa iBitcoin kunye neDash kunye nephepha lokufaka imali kwi-P2P.
Ngoku i-PIVX yongezwe kwipulatifomu!
“Indlela efanelekileyo yokukhula kwendalo yethu kukusebenzisana ne-crypto esiyikholelwayo kuyo, ngoko ukudibanisa ne-PIVX yinkathelo elandelayo efanelekileyo kwimisebenzi yethu yokwenza lula ukwenza i-cryptocurrency kwinkqubo yokuhamba.” – UBen Kiekel, uphuhliso lwezorhwebo olukhokelela kwiWorld of Coins.
‘iWall of Coins’ luphelisa enye yemingcipheko enkulu ekungeneni kwezona zinto ziza kuvela kwi-crypto ubuso; inkqubo yotshintsho. Esikhundleni senkqubo yokutshintshwa kwendabuko, kunye neengxowa ezininzi,
izikhuselo ezilukhuni ezinqabileyo ukugqithisa, kunye neenombolo ezi-34 zee-ID zezikhwama; I-Wall of Coins inikezela ukuthengwa kwamanye amazwe kunye nokuthengisa indawo eyenza ukuthenga i-PIV ibhepo.
(Faka iPIVX endaweni ye-BTC)
Khetha nje imali oyifunayo ukuyithengisa okanye ukuthengisa, khetha indawo yokufaka idizithi kwiindawo ezili-170,000 ezifumanekayo kwii-12 kumazwe ngamazwe, yenza idiphozi efunekayo, kwaye ufumane iPIV yakho!
“Ukuzimisela kwe-PIVX yokuba yimali eyamkelekileyo kakhulu ekusebenziseni zonke iintlobo, kubandakanye abathengisi behlabathi lonke, yenza iWold of Coins isisitye esipheleleyo kwi-arsenal yethu ebonakalayo inomdla.” – i-s3v3n h4cks, i-PIVX Co-Founder.
Udonga lweeNkozo, olukhokelwa ngu-CEO uRobert Genito, luye lwaba ngumsebenzi ukususela ngo-2014 ukwenza ukuthenga i-crypto elula, ukuphelisa isidingo seakhawunti ezinzulu kunye nokunikezela inkqubo elula evumela ukuba nabo abangenayo i-akhawunti yebhanki bathenge i-crypto. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa landela kwi-Facebook kwaye uvakatye kwiwebsite yabo kwi-wallofcoins.com.
Ukuba ufuna ukuthengisa iBTC, iDASH okanye i-PIVX, nceda ubhalisele kwisayithi ukukunceda ukwakha i-userbase!